statement | SAVE OUR COUNTRY | SAVE MYANMAR | RESPECT OUR VOTES | HONOR ELECTION RESULTS
အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ထုတ်ပြန်ချက် (16.11.2021)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မ တီရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက်ချင်းပြည်နယ်၊ ထန်တလန်မြို့၌ အာဏာ သိမ်း စစ်ကောင်စီတပ်များ၏ အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် (KNDF)မှသဘော ထားထုတ်ပြန်
Posted on Sep 7, 2021 by ချစ်သဲညှာ	Leaveacomment
D-Day: တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် လှည်းနေ လှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် စက်တင်ဘာ ၇ ရက် မှစပြီး တော်လှန်ရန် အရေးပေါ်အခြေအနေသတ်မှတ်ပြီး ရက်အကန့်အသတ်မရှိ အ လုပ်ပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း NUG ကြေငြာ။
စစ်​ကောင်စီကို လက်နက်ဖြင့် အပြည့်အစုံဖြင့် စွန့်ခွာလာ​သော တပ်မ​တော်သားများကို ဆု​ငွေ သိန်း ၅၀ နှင့် ခိုလှုံခွင့်​ပေးမည်
ပြည်သူကို သတ်ဖြတ်နေသော အကြမ်းဖက် စစ်​ကောင်စီကို လက်နက်ဖြင့် အပြည့်အစုံဖြင့် စွန့်ခွာလာ​သော တပ်မ​တော်သားများကို ဆု​ငွေ သိန်း ၅၀ နှင့် ခိုလှုံခွင့်​ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်မတော် PRA က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
“အာဏာလုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့မှ ရုန်းထွက်၍ပြည်သူအားကိုးထိုက်သောတပ်မတော်သားဖြစ်လိုပါက ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်မတော် (PRA) အနေနဲ့အစစအရာရာတာဝန်ယူပြီး Full Equipment (လက်နက်အပြည့်အစုံ) နှင့် ပြည်သူနှင့်အတူရပ်တည်ကာ CDM ဝင်ရောက်လာပါက ကျွန်တော်တို့ PRA မှ ဆုငွေ(သိန်း ၅၀ ကျပ်တိတိ) နှင့် ခိုလှုံခွင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်” ဟု PRA၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
PRA၏ ဖုန်းနံပါတ်အနေဖြင့် 09-755147317 / 09-455909826 တို့ကိုလည်း ကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။khit thit
ပြည်သူ့တပ်မတော်သားများနှင့် ပြည်သူ့ရဲဝန်ထမ်းများ စစ်ကောင်စီအမိန့် မနာခံရန် NUG ထုတ်ပြန်
Posted on Aug 29, 2021 by ချစ်သဲညှာ	Leaveacomment
ပြည်သူ့တပ်မတော်သားများနှင့် ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ရည်ညွန်းပြီး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ၏ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဩဂုတ် ၂၈ရက် ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်သည်။
ကြေညာချက်တွင် ပြည်သူ့ တပ်မတော်သားများ၊ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့များ အနေဖြင့် တရားမဝင်အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ၏ အမိန့်၊ ညွှန်ကြား ချက်များကို မနာခံကြရန်၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နှင့် မဟာမိတ်များကို ဟန့်တားနှောက်ယှက်သည့် လုပ်ရပ်များ မလုပ်ရန် နှင့် ပြည်သူများအား ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းများအပြင် ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကို လုယက်ဖျက်ဆီးမှုများ မပြုလုပ်ရန်ဆိုသည့် အချက်သုံးချက်ကို အဓိက တိုက်တွန်းထားသည်။
သည့်အပြင် ပြည်သူ့ရင်ခွင်ကို ခိုလုံပူးပေါင်းမည့် ပြည်သူ့သားကောင်း တပ်မတော်သားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် လိုအပ်သလို ကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း NUG အစိုးရက တိုက်တွန်းထားသည်။ ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလှုံမည့် ပြည်သူ့တပ်မတော်သားများ ပြည်သူ့ရဲများအနေဖြင့် အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ကြရန် တိုက်တွန်းထားသည်။mizzima
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီကို ချေမှုန်းရန် နိုင်ငံတစ်ဝန်း တော်လှန်ရေးအင် အားစု ၁၂ ခု မဟာမိတ်များအဖြစ် ဖွဲ့စည်း
အကြမ်းဖက် လူသတ် ဖက်ဆစ် စစ်ကောင်စီကို ချေမှုန်းရန် အတွက် နိုင်ငံတစ် ဝန်းရှိ တော်လှန်ရေး အင်အားစု ၁၂ ခုက မဟာမိတ်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်းများထံမှ သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းရှိ ပြည်သူများ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော လူထုအစိုးရထံမှပြည်သူ့အာဏာကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ဖေဖော် ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့တွင် လက်နက်အားကိုးဖြင့် အကြမ်းဖက်လုယူထားသည်မှာ (၆)လကျော် ၇လနီးပါးရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကာလအတွင်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကို တရားမဲ့ ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီး ရိုက်နှက် သတ်ဖြတ်ကာ အကြမ်းဖက်နည်းမျိုးစုံဖြင့်ဖြိုခွင်းခဲ့သောကြောင့် အနည်းဆုံးပြည်သူ(၁၀၀၀)ကျော် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ပြည်သူအားလုံး၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊လုံခြုံရေးနှင့် တခြားရပိုင်ခွင့်များနေ့တိုင်းဆုံးရှုံးလျှက်ရှိကြောင်း အဖွဲ့အစည်းများက ပြောဆိုကြသည်။
ထို့ပြင် စစ်ကောင်စီမှ Covid-19ရောဂါအားလက်နက်အဖြစ် ရက်စက်ယုတ်မာစွာအသုံးချခဲ့ခြင်းကြောင့် ပြည်သူထောင် ပေါင်းများစွာ အသက်မသေသင့်ဘဲအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်မှာ အားလုံးမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လက်နက်အားကိုးအကြမ်းဖက်နိုင်ငံ့သစ္စာဖောက် စစ်တပ်နှင့် ၄င်းတို့၏အပေါင်းအပါများကို ဖယ်ရှားနိုင်မှသာ ပြည်သူများခံစားနေရသော ဒုက္ခများမှ လွတ်မြောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းများက ပြောဆိုသည်။
ပြည်သူများကြားမှပေါက်ဖွားလာသော အောက်ပါတော်လှန်ရေး အင်အားစု( ၁၂ ) စုသည် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုထိရောက်မြန်ဆန်စေရန်အတွက် မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းကာ ပြည်သူများအားလုံးနှင့်လက်တွဲပြီး စစ်မှန်သောတရားမျှတမှုရရှိသည်အထိ အဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့အစည်း ၁၂ ခုက ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။ မဟာမိတ်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းလိုက်သော အဖွဲ့အစည်း ၁၂ ခုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
1. People Defense Force Mandalay (MDY-PDF)
2. Yangon Urban Guerrillas(YUG)
3. People’s Defense Force -ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်
4. Yangon Federal Army (YFA)
5. Zero Nine (PDF-MGN)
6. People Defense Force (ShweGu)
7. Pakokku People Defense Force (PPDF)
9. Kawlin People Defense Force (KLPDF)
10. Kyaukse Distric Defense (KDDF)
11. Mandalay Special Task Force (MSTF)
12. 27 Revolution Forces (MGN)
မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများ ဆောင်ရွက်တော့မည်ဖြစ်၍ ပူပေါင်းပါဝင်ကြရန် ဝေါ PDF တိုက်တွန်း
Posted on Aug 27, 2021 by ချစ်သဲညှာ	Leaveacomment
မကြာမီကာလအတွင်း မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများ ဆောင်ရွက်တော့မည်ဖြစ်၍ မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ များအတွက် တိုက်ပွဲဝင်မည့် ကိုယ့်မြို့နယ်မှ အချိတ် အဆက်မမိသေးသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း မဟာမိတ်ဖွဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန် ဝေါမြို့နယ် PDF က တိုက်တွန်းထား သည်။
လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသော စစ်သားများနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ လက်အောက်တွင် တာဝန်မထမ်းဆောင်လိုပါက မိမိတို့(PDF)အဖွဲ့များနှင့် လာရောက်ပူးပေါင်းပေးပါရန် ဖိတ်ခေါ်ကြောင်းလည်း ၎င်းတို့၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဝေါ PDFအဖွဲ့က စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးရေးနှင့် ပြည်သူများအပေါ် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် NUGအစိုးရ၊ EAO (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့) များ၊ တိုင်း/ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၊ အနီးပတ်ဝန်းကျင်မြို့နယ်များရှိ PDF အဖွဲ့များနှင့်လည်းချိတ်ဆက် ထားကြောင်း သိရသည်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပါက ပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေးကို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်၍ အချိန်တိုအတွင်း မြို့သိမ်း တိုက်ပွဲပြီးဆုံးနိုင်ရေးအတွက် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ၏ လှုပ်ရှားမှု သတင်းများကို PDF တပ်ဖွဲ့များထံသို့ အချိန်မီသတင်းပေးပို့ရန်လည်း မေတ္တာ ရပ်ခံထားသည်။khit thit
စစ်ပွဲကြီးများကို ရှောင်လွဲပြီး နိုင်ငံရေး ပြဿနာများကို စစ်မှန်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန်မျှော်လင့်ဟု KIO ထုတ်ပြန်
Posted on Aug 25, 2021 by ချစ်သဲညှာ	Leaveacomment
စစ်ပွဲများကို ရှောင်ရှားပြီး နိုင်‌ငံရေး ပြဿနာကို မှန်ကန်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းသွားရန် မျှော်လင့်ကြောင်း အချက်(၅)ချက်ပါ ကြေညာ ချက်တစ်စောင်ကို ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIOက ယနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှစပြီး ယနေ့အထိ ဘက်ပေါင်းစုံက ပိုမိုခက်ခဲလာသောကြောင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများအတွက် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရန် နိုင်ငံရေး အခွင့်အလမ်းများ ပိတ်ဆို့သွားမည်ကို မြင်တွေ့နေရကြောင်း KIO ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ယင်းအပြင် Covid-19 ကပ်ရောဂါလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုမို ဆိုးရွားလာနေပြီး ပြည်သူတွေအနေ ဖြင့် စိတ်သောကရောက်နေရသလို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးသွားသည့် ပြည်သူများအတွက် ကေအိုင်အိုက စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်ဟု KIO ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
Covid-19 ကပ်ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကူညီပံ့ပိုးနေသည့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးဇူးတင်မိကြောင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ၊ ခက်ခဲနေသည့်ချိန် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လျှင် ကောင်းကျိုးမရှိ၍ သက်ဆိုင်သူများနှင့် အတတ်နိုင်ဆုံးညှိနှိုင်းသွားမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။khit thit
လူထုကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရန်မှကာကွယ်ရန် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်၊ နမ့်ခမ်း၊ လားရှိုး၊ သိန္နီ၊ နောင်ချိုနှင့် ကျောက်မဲမြို့နယ်ရှိ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး ခုနှစ်ဖွဲ့က စုပေါင်းလိုက်ပြီး ရှမ်းမြောက် ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (NSSDF) ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း ယနေ့နံနက်တွင် ထုတ်ပြန်
Posted on Aug 24, 2021 by ချစ်သဲညှာ	Leaveacomment